Ny vidin'ny fiara an-trano dia tapa-kevitra! | RayHaber | raillynews
[16 / 02 / 2020] Fiaran-dalamby nandeha tany Etazonia nivadika tao anaty renirano ary Flamed	1 America
[16 / 02 / 2020] Fahefana ho an'ny JPMorgan ho an'ny tetezana Osmangazi sy Gebze İzmir Motorway stock Sales	41 Kocaeli
HomeTORKIAFaritra Marmara16 BursaNy vidin'ny fiara an-trano dia tapa-kevitra!
28 / 01 / 2020 16 Bursa, ANKAPOBENY, Highway, Headline, Faritra Marmara, fiara, TORKIA
ny vidin'ny fiara an-trano dia tapa-kevitra
Tiorkia Automobile Enterprise Group (TOGG) Tale Jeneralin'ny GurcanTurkoglu King, mizara vaovao mikasika ny vaovao ao an-toerana automakers. Hoy i Karakaş: "Miresaka amin'ny Bosch an'ny fiara izahay. Nanao sonia fifanarahana tsiambaratelo tamina orinasa sinoa 6 izahay ho an'ny baterin'ny fiara. ”
Tiorkia Automobile Enterprise Group (TOGG) Tale Jeneralin'ny GurcanTurkoglu Karakas, hoy tsipiriany momba ny vaovao ao an-toerana automakers.
Araka ny vaovao momba an'i Burak Coşan avy any Hürriyet,Hoy Gürcan Karakaş: "Niara-niasa tamin'ny tsara indrindra izahay teto amin'izao tontolo izao, hatramin'ny famoronana ka hatramin'ny famoronana. Tsy betsaka ny orinasa afaka manao herinaratra hatrany am-bohoka. Miara-miasa isika miaraka amin'ny mpiara-miasa izay nahazo an'io teknolojia io ary miara-miasa amin'ity dingana ity. Izahay dia miresaka amin'ny biraom-pandehan'ny fiara amin'ny fiara. Nanao sonia fifanarahana tsiambaratelo tamina orinasa sinoa 6 izahay ho an'ny baterian'ny fiara. Izahay dia hiatrika ny iray amin'izy ireo. Nisafidy ny orinasa injeniera Alemana EDAG izahay ho mpiara-miasa amin'ny teknolojia amin'ny fampidirana fiara. Myra dia iray amin'ireo mpiara-miombon'antoka aminay, indrindra amin'ny takelaka mekanika, amin'ny rafitra chassis izay neken'ny Angletera. Nifanaraka tamin'ny Italiana izahay amin'ny famolavolana. ”
Nanohy toy izao i Karakaş: “Izahay mijery hoe iza no tsara indrindra eto an-tany hanao an'io asa io. Vita ny fahatsiarovana ny mpamatsy ho anay toy ny Aprily sy Mey. Afaka mitondra io teknolojia ho any amin'ny firenentsika izay izahay mijery azy avy any Torkia. Tena nanao fikarohana be izahay. Afaka mamokatra any Torkia, mahomby kokoa ny vola lany-Moa ve niteraka any an-kafa mba hijery azy. Rehefa mipetraka eo anoloan'ny mpiara-miasa izahay dia fantatsika hoe inona izany. ”
INONA NO MBOLA INDRINDRA?
Gürcan Karakaş, izay tsy mizara fampahalalana momba ny fiara ho vokarina, dia nanazava ny antony nahatonga an'io:
“Tsy mety ny mizara vidiny satria tsy te hanome vaovao amin'ireo mpifaninana aminay izahay. Na izany aza, hatramin'ny taona 2020, ny vidin'ny vidin-tsolika na fiara-solika izay amidy amin'ny ampaham-C-SUV dia miovaova eo anelanelan'ny 250 sy 300 TL. Amin'ny taona havoaka ny fiara an-trano, dia afaka mifaninana amin'ny vidin'ireto fiara ireto. ”
NY ASA ATSORATRA MOMBA NY AUTOMOBILE AN-TOKONY DIA ETO ANTSIKA
Gürcan Karakaş dia nilaza fa nanomboka ny fanaraha-maso ny tany amin'ny fananganana orinasa TOGG ary nilaza fa hapetraka amin'ny volana Mey ny fananganana ny orinasa.
Hoy i Karakaş: "Amin'ny 2022, hampidina ny fiara voalohan'ny famokarana izahay avy amin'ny paompy. Ao an-tsenanay, izay hahatratra hatrany amin'ny famokarana herinaratra 15 isan-taona miaraka amin'ny famatsiam-bola 22 miliara TL ao anatin'ny 175 taona, mikasa ny hampidina fiara 2032 tapitrisa izahay avy amin'ny tarika amin'ny taona 1. ”
Ny filazan'izy ireo fa ny fanondranana voalohany azo atao amin'ny endrika simbolika tamin'ny 2024, dia hoy i Karakaş: "Ankehitriny, izahay dia nanokana 10 isan-jaton'ny fahafahan'ny fanondranana. Na izany aza, mety hampitombo bebe kokoa hatrany izany araka ny fangatahana. Afaka mihazona hatrany an'io fanovana io isika. ”
Nambara ny sarin'ny fiara eo an-toerana
Alanya Cable fiara
Ny vidin'ny fiara fitaterana iray dia natao tany Alanya
Ben'ny tanàna Akyürek: "Irinay ny famokarana fiara an-trano ao Konya"
Fanamboarana fiara an-trano an-trano fiorina ao Kocaeli
Fiafaran'ny fiarovana ny fiara an-trano
Iza no nandray anjara tamin'ny famolavolana ny fiara an-trano?
Ohatrinona ny vidin'ny fiara ao an-trano?
Ny vidin-tsolika any Alanya Re-18 TL
Ny sekoly dia ahafahana manome fahafaham-po ny filàna teknika ho an'ny fiara an-trano
Navoakan'ny Metrobus ny sambo nivantana teo akaikin'ny fiara
Iza moa i Gürcan Karakaş
TOGG fananganana orinasa
Ny fototry ny trano fiara an-trano
Fihenam-bidy amin'ny vidin'ny fitateram-bahoaka any Samsun
Izmir Tramway dia manakana ny famoahana karbona dioxide!